सोमबार, भदौ २८, २०७८ साझावोली न्यूज
काठमाडौँ - नेपालमा कोरोना संक्रमण दर घट्दै गएपछि जोखिम कायमै रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् । पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा कोरोना संक्रमणको दर घट्दो क्रममा छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सोमवार सार्वजानिक गरेको तथ्यांक अनुसार परीक्षण संख्याको अनुपातमा पोजिटिभ रेट (पीपीआर) ८.९ प्रतिशत रहेको छ । आइतबार सो संख्या ८.२७ प्रतिशत देखिएको थियो ।
हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि ३० हजारभन्दा कम हुँदै गएको छ । सोमबारको तथ्यांक अनुसार सक्रिय संक्रमितको संख्या २६ हजार ६३० मा झरेको छ । सोमबार कुल १६ हजार ५३९ पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो । पीसीआर परीक्षणमा १ हजार १४९ र एन्टिजेन परीक्षणमा ३३७ जनामा संक्रमण देखिएको छ । निको हुनेको संख्या १ हजार २६० रहेको छ ।
संक्रमण दर घट्नुमा परीक्षण कम हुनु पनि एक कारण रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । मास्कको प्रयोग, खोप कार्यक्रम र वातावरण लगायतका कारण संक्रमण घटेको विज्ञहरुको भनाई छ ।
जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले संक्रमण दर अपेक्षित रुपमा नघटेको बताए ।
‘मुख्य कारण त जनस्वास्थ्यको पालना राम्ररी नगर्नु नै हो । हामी जोखिमकै वरिपरी छौँ । पीपीआर ५ प्रतिशतभन्दा तल जान सकेको छैन,’ डा वन्तले भने । देशभरि कोरोना संक्रमितको संख्या पहिचान भएको भन्दा धेरै रहेको उनको भनाई छ । ‘विद्यालय होस् वा चाडपर्व, राजनीतिक भेटघाट, जुलस होस् संक्रमण विस्तार हुन सक्ने जोखिम र सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न, उनले भने ।’
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ २८, २०७८, १९:२६:००